Warshadda Nadiifinta - Shiinaha Nadiifinta Qalabka Soo-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
24L / 32L Side saxaafadda hal wringer tarooli -H0101 / H0102
Qoob-ka-ciyaarka dhaqameed ayaa gacmaha ku maroojin jiray biyaha, baaldi sidoo kale waa culus yahay waana adag yahay in la dhaqaajiyo, wasakh iyo daal badan. Trolley-ka wringer wuxuu tuujin karaa biyaha wasakhda ah adoo hoos u riixaya, qalcadaha wareegaya oo si sahlan loo dhaqaajin karo. Nadiifintu waxay u oggolaanaysaa nadaafadda mid fudud.
36L Side saxaafadda hal wringer tarooli B-040
Inaad nadaafadda ku ilaaliso ma aha hawl fudud, laakiin isticmaalka baaldi xaaqida saxda ah ayaa kuu sahli kara. Haddii aad maamusho ganacsi yar ama hay'ad weyn, baaldi qashin iyo wringer ayaa ah daruuri lagama maarmaan u ah wax walba laga bilaabo nadiifinta maalinlaha ah ilaa qalalaasaha kadiska ah.
24L / 32L Hoos u riix tarooli hal-wringer -H0102 H0104
Gawaarida wringer yar yar oo ku habboon, adeegsi ballaaran, sida guriga, aqoon isweydaarsiyo, bakhaarro, xarumaha saadka, dukaamada waaweyn iyo wixii la mid ah, oo ku habboon dhammaan dhulka sagxadda.
34L / 46L Side press tarooli wringer tarooli -H0201 0202
Waxay ka samaysan tahay caag cusub oo heer sare ah. Ahaanshaha qaro weyn, baaldi waa bambo-caddeyn. Dusha sare ee jilicsan ayaa fududeeya nadiifinta. Shaagagyadu waxay ka samaysan yihiin caag saafi ah, oo saamaxaya sawaxanka oo aan buuq lahayn, isla markaana aan raad ku reebin roogga.
34L / 46L Hoos u riix shaabad labalaab ah - H0203 / H0204
Madaxa soosaarida biyaha la xoojiyey ayaa qalajinaya qalajiyaha wuxuu ka sameysan yahay bir wanaagsan, oo u oggolaaneysa adeegsi dheer. Dabacsanaanta ma hoos u dhacdo. Guggu ma dillaaco Balaastiigga xereen ee la sameeyay xamili waa nabaad-guur. Shayga waa fiican ka mid ah waxyaabaha noociisa ah.
Nadiifinta Wax Foosto B042
Sanduuqa keydinta gacanta ayaa lagu keydin karaa qalabka, sahayda nadaafadda, sahayda caafimaadka, saadka farshaxanka.
Nadiifinta Caddy B041
Qaado dhammaan qalabkaaga nadaafadda, jeermis-dileyaasha, qalabka, ama sahayda caafimaad adigoo wata Twin Tote Caddy oo waxtar leh. Laba jeeb oo qoto dheer, baaxad weyn ayaa muddo dheer bixiya keyd deeqsi ah oo loogu talagalay qalabka iyo qalabka nadiifinta, xitaa walxaha yaryar ma lumiyaan. T
Qalabka Wax Ka Qabashada Caddy B-039B
Jeebka qoto dheer ee weyn ayaa qaban kara sahay badan oo nadiifin ah ama qalab qalab